सावधान ! भुलेर पनि कहिल्यै नभन्नुहोस् आफ्नो बच्चालाई यी ३ कुरा ! – MediaNP
काठमाडौँ । अभिभावक बनेसँगै धेरै जिम्मेवारी थपिएको हुन्छ । यो सँगै बालबच्चाको लालनपाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । बच्चाको पहिलो पाठशाला घर हो । बच्चा हुर्कने वातावरण जस्तो छ बच्चाले पनि त्यस्तै सिक्ने गर्छन् । बच्चाले धेरै कुरा सिक्ने भनेको नै आफ्नो आमा बाबूबाट हो । मुख्य कुरा छोराछोरीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा बाबूआमाको हातमा रहेको हुन्छ । त्यसकारण आज हामी अभिभावकले आफ्नो बच्चाहरुलाई भन्न नहुने यी तिन कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । जुन कुराहरु भुलेरपनि नभन्नुहोला ।
१.बच्चालाई डराउने : धेरै आमाबाबूले बच्चालाई सुताउन होस् या कुनै काम गराउनको लागि डर देखाउने गर्छन् । जसबाट बच्चाहरु डराउने गर्छन् । प्राय बच्चालाई सुताउनको लागि पनि छिटो सुत नत्र भुत आउँछ , त्यहाँ नजाउ जोगी आउँछ , भूत , जोगी, राक्षस जस्ता शब्दको प्रयोग गरेर बच्चालाई डर देखाउनु हुँदैन् ।
२.धम्काउने : बच्चाहरुको बानी नै हुन्छ होमवर्क गर्न नमान्ने, समयमा नपढ्ने, गल्त गरेको छ भने घरबाट बाहिर निकाल्ने, धम्की दिने, बालबच्चाको लागि यस्तो गर्नु भनेको निकै खतरनाक हो । यसो गर्दा बच्चाको दिमागमा मानसिक चोट पर्छ ।
३.भर्बल अब्युज : तैले खाना खाइनस भने कुटाइ खालास भन्ने कुरा लगभग धेरै बालबालिकाको घरमा सुन्ने गरिन्छ । कतिपय अभिभावकले त खाना नखाएको भन्दै बच्चालाई कुट्ने र पिट्ने पनि गर्छन् । यदि तपाईको यस्तो बानी छ भने आजैबाट छोडिदिनुहोस् । बच्चालाई खाना खुवाउने अर्को उपाय अपनाउनुहोस् । बच्चालाई राम्रोसँग सम्झाउने गर्नुहोस् ।
बलिउड फिल्म ‘स्त्री’ को सिक्वेल बन्ने